Home » Creative Writing » My Dear Diary
မန်းတလေးမှာ ဆိုင်ကယ် အတိုက်ခံနိုင်တဲ့ သံချပ်အကျင်္ှီတွေ ချုပ်ရောင်းမှနဲ့တူတယ် .. :grin:
ဒိုင်ယာရီ လေး ကို တိတ်တိတ်လေး ခိုးဖတ် သွားကြောင်း အသိပေးပါတယ်။
ကိုပေလည်း ဦးထုပ်ဆောင်းအုန်းနော် ( အဖော်မဟုတ် )
ခုခေတ်ကယာဉ်တွေကလဲပေါး စီးတဲ့သူတွေကလဲ လူမျိုးပေါင်းစုံ
ဦးပေ နောက်တစ်ခါ ပျင်းရင်
မန္တလေးမှာ စူပါဖိုးလ်တွေပေါတယ်ဆို ကိုပေပြောဖူးတယ်လေဗျာ။
အူးပေ မန်းလေးကလူတွေကြောက်တတ်တာလား။ ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကယ်သမားကို ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာများသိနေလို့လား။ ရပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့။ ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်ပြီးတန်းမောင်းမပြေးပဲဆင်းတောင်ဆဲနေသေးတယ်ဆိုတော့ မုန်းလိုက်ထှာ။ ရွှေကြည်ဂျက်ကီချန်းတို့လောက်သာ ကွန်ဖူးကျွမ်းလို့ကတော့ သေပြီသာမှတ်။ အမုန်းဖဲ့ပစ်မယ်။
ခေတ်မမှီတော့တဲ့ ရှေးကစကားပုံကို အသစ်ပြောင်းပေးရမယ်။
ကိုပေရေ .. ဖတ်ရင်းတောင် လန့်သွားတယ် ..။
ဒီကိစ္စမှာ တာဝန်ရှိသူက ၀စ်သောက်တွေ စီးနေတာ မုန့်ဖိုးယူပြီးငြိမ်နေတဲ့ ဟိုဒင်းတွေပါပဲ ။ သူတို့သာ ၀စ်သောက်တွေကို ထိထိမိမိဖမ်းမယ်ဆိုလျှင် … တစ်ခုခုဆို နံပါတ်မှတ်နိုင်မှာပါ … ။ အခုတော့ ဟိုနှစ်ယောက်ခမျာ ခံလည်း ခံရသေး … အရေးယူတိုင်တန်းမှုလည်း လုပ်လို့ မရတော့ … မိအေး နှစ်ခါ နာရသလိုပါပဲ …. ။
ကိုပေနဲ့ …. ရွာသူရွာသားတို့လည်း ခလုတ်မထိ စူးမငြိပါစေနဲ့ …. သွားလမ်းသာလိုက လာလမ်းဖြောင့်ပါစေနော် … ဟီး :D
ကိုပေရေ…ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်ရင်တောင် လက်ပိုက်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေတတ်တဲ့လူမျိုးတွေလေ…
ရှိသေးတယ် ဒါမျိုးအမှုတွေက အကင်းပဲရှိသေးတာ။
ကျုံးထဲမှာလည်း လူသေတာ ခဏခဏ ။ ဘယ်တော့မှ မပေါ်ဘူး။ နောက် အသိထဲက ကလေးတယောက် ၁၀တန်းဖြေပြီးခါစ ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ လုပ်ထားတာ တနေ့က အိမ်ပြန်မလာလို့ မိဘတွေက အလည်လွန်တယ်မှတ်နေတာ ပြန်မလာပြန်မလာနဲ့ နောက်တော့ ဆေးရုံမှာ အလောင်းသွားတွေ့တယ်။ မိန်းထဲမှာ ဘယ်သူက ရိုက်ထားမှန်းမသိပဲ လက်သည်မပေါ်ပဲ ဆုံးသွားရှာတယ်။
သာမာန် တခါမှ ရန်မဖြစ်ဖူးတဲ့ ကလေး ဘယ်လို အဖြစ်ဆိုးတွေများ ကြုံခဲ့သလဲ မသိဘူး။ သူ့အမေဆိုတာ အရူးတပိုင်း။ ခုထိ အမှုလည်း ဒီလိုပဲ ပြီးသွားတာပါ။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးတဲ့ ။ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ ရှေ့လျှောက် လူတိုင်းအဖြစ်ဆိုးတွေ ကင်းအောင်။
လူ၂၀နဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကြည့်မကောင်းလို့ အားနည်းတဲ့ဘက်က ၀င်ပါတော့မလားလို့ စိတ်ပူသွားတာ…
ဆက်ဖတ်တော့မှ ကြည့်မကောင်းလို့ ပြန်ထိုင်လိုက်မှန်း သိလိုက်ရတယ်။ [:))]
ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် မပေးတာ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးစီးလာတဲ့ကားကို စကော်ပီယံဂိုဏ်း မော်တော်ဆိုင်တွေက ပြသနာရှာလို့ ဖြစ်တာလို့ ကောလာဟာဠ ထွက်တယ်။ အခုလို လမ်း၊ ယဉ်စည်းကမ်း ထိန်းမရ သတင်းတွေ ကြားရတော့ ဒါတွေ ကြိုမြင်ထားလို့များ လုပ်သလား တွေးမိပါတယ်။
လက်ပိုက် ၀ိုင်းကြည့် အတင်းတုတ်တဲ့နေရာမှာ ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးက စံထားလောက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက ဗဟိုလမ်းပေါ်မှာ အဓိပတိကားက လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ကလေး ၂ယောက်ကိုဝင်တိုက်တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျမစီးလာတဲ့ ၂၀၄ ဘတ်စ်ကားက အဲဒီနေရာကဖြတ်ရတော့ သွေးအိုင်ကြီးကိုမြင်ရတာနဲ့ ဆက်မကြည့်ရဲတော့ဘဲနေလိုက်တယ်။ (အကူညီပေးချင်ရင်တောင် ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ တွေးပြီးရှက်မိပါသေးတယ်) ။ ၀ိုင်းအုံကြည့်နေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးကမနဲသလို ကျမတို့ကားပေါ်က စိတ်ဝင်စားသူအပေါင်းကလဲ ကားပြတင်းဆီကို အတင်းတိုးလာပြီးကြည့်ကြတော့တာပါဘဲ။ ပါးစပ်ကလဲ ” ဟယ် လှုပ်နေသေးတယ်၊ သွေးတွေမှအများကြီး၊ ဟိုလူကဘာလို့သွားကိုင်နေတာလဲ “အစရှိသဖြင့် အပြစ်တင် ဝေဖန်ပြီးသကာလ မဆိုင်သလိုဘဲ နေရာပြန်ယူကြပါတယ်။ ကားလမ်းကတော့ တဘီးချင်းလှိမ့်သွားရလောက်အောင် ပိတ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာမှမကူနိုင်ဘဲ သူများဒုတ်ခဖြစ်တာကို သနားပါတယ်တခွန်းပြောပီး ၀ိုင်းကြည့်နေနိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကတော့ အတော်ဆိုးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
နောက်တခု စဉ်းစားမိတာက မတော်တဆမှုတခုဖြစ်ပီဆိုရင် အရင်ဆုံးအကြောင်းကြားရမှာက အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် နဲ့ ရဲဌာနလို့ ထင်ပါတယ်။ အခုလိုကိတ်စမျိုးမှာ အဲလိုလူတွေ အစောဆုံးရောက်နေသင့်ရက်နဲ့ ဘာလို့မရှိတာပါလိမ့်။ တာဝန်သိစွာနဲ့ အကြောင်းကြားပေးမဲ့လူမရှိတာကြောင့်လား။ မဟုတ်သေးပါဘူး တိုက်လိုက်တဲ့ ကားဆရာက ဒီကိတ်စလောက်တော့ လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ ဒါဆို ဘာလို့ အဲဒီ ကောင်လေး၂ယောက်သွေးအိုင်ထဲမှာ အကြာကြီးလဲနေတာပါလ်ိမ့်။ စဉ်းစားရင်း ခေါင်းကိုက်လာပါသဖြင့် ခဏရပ်ပါအုံးမည်။
*ကိုhtoosan ရေ.. အဲဒီလိုသာရောင်းရင် ပိုကဲကုန်ကြမယ်ထင်တယ်ဗျ